नेपाली पब्लिक आइतबार, असोज ११, २०७७
लामो समयदेखि आख्यानको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका डा.सञ्जीव उप्रेतीले आफ्नो उपन्यास ‘हंस’लाई २०७६ को पद्यश्री पुरस्कार दिने घोषणासँगै पुरस्कार अर्पण गर्ने निर्णयप्रति विमति राखेका छन् ।
खेमलाल–हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले पुरस्कारसँगै पद्मश्री साधना सम्मान मोदनाथ प्रश्रितलाई दिने निर्णयप्रति उप्रेतीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले यौन हिंसाको आरोप लागेका प्रश्रितसँग एउटै मञ्चमा उभिएर पुरस्कार ग्रहण नैतिकताले नदिने बताउँदै विमथि राखेका हुन् । शारदा भुषालले ‘धरातल’ पुस्तकमार्फत् प्रश्रितलाई लगाएको यौनहिंसाको आरोप कायमै रहेकाले आफूले उनीसँग पुरस्कार लिन अस्विकार गरेको डा. उप्रेतीले बताए ।
नेपाली पब्लिकसँग उप्रेतीले भने, ‘मैले आयोजकलाई आफ्नो मत पठाइसकेको छु । मसँग दुई ओटा विकल्प छन् । पहिलो, कि मैले सार्वजनिक रुपमा पुरस्कार वहिष्कार गर्नुपर्‍यो । नत्र मलाई र मोदनाथ जीलाई एउटै मञ्चबाट पुरस्कार चाहिँ दिनु भएन । अहिले मैलै पुरस्कार वहिष्कार गरेको होइन, तर आयोजकको निर्णयअनुसार मेरो निर्णय हुनेछ । यौन हिंसाको आरोप लागेकासँगै उभिएर कसरी पुरस्कार लिऊँ !'
यदि आयोजक दोस्रो विकल्पमा जाने निर्णय आयो भने पुरस्कारस्वरुप आउने रकम यौन हिंसा पीडित महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘द पर्पल ग्रूप’लाई प्रदान गर्ने पनि उनले बताए । पुरस्कारको राशी जनही रु.३ लाख रहेको छ ।
डा. उप्रेतीको ‘पोट्याटो, बटर एण्ड कफी’ अंग्रेजी उपन्यास २०५० सालमा प्रकाशित भएको थियो । यसको नेपाली अनुवाद ‘आलु, नौनी र कफी’को रुपमा प्रकाशित छ । त्यसपछि ‘घनचक्कर’ उपन्यास, ‘मकैको अर्कै खेती’ नाटक र ‘सिद्धान्त कुरा’ समालोचना कृति डा. उप्रेतीका कृतिहरु हुन् ।
नेकपाका नेता प्रश्रितका मानव, देवासुर संग्राम (महाकाव्य), गोलघरको सन्देशलगायत कृति छन् ।
यौन हिंसा र धम्की
शारदा भुषालको पुस्तकमाथि डा. अर्चना थापाले सञ्चालन गर्दै आएको मासिक अन्तरक्रियात्मक फोरम ‘आह्वान’ले मार्टिन चौतारीमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । सो कार्यक्रम गरेवापत डा. थापाले निकै धम्कि खेप्नु परेको पनि उनले बताए । डा. थापा उप्रेतीका श्रीमती हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापन सेवाबाट सेवानिवृत्त डा.उप्रेती र डा. थापा दुवै लैंगिक समानताका पक्षमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।
पुरस्कार प्रदान गर्नेको प्रतिक्रिया
यसमा विषयमा समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने हाल जर्मनीमा रहेका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नेपाली पब्लिकलाई बताए ।
डा. उप्रेतीको पुरस्कारप्रति नभई सँगै पुरस्कार लिने अर्का व्यक्तिसँग एकै मञ्चमा उभिन अस्वीकार गरेको लेखक कृष्ण धरावासी बताउँछन् । उनले भने, ‘पुरस्कार लेखनको सम्मानमा दिइएको हुनाले नलिनु पर्ने केही छैन । तर लेखकले प्रक्रियामाथि आफ्नो विमति राख्न पाउँछ, डा. उप्रेतीले त्यही विमति मात्रै राखेका हुन् ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ११, २०७७ २२:३८